करोडौंको घरसम्पति आफ्नै डा. छोराले सबै हडपेर कु’टपिट गर्दै सडकमा पुर्‍याए पछि, आमाबुबा मिडियामा (भिडिओ) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Video/करोडौंको घरसम्पति आफ्नै डा. छोराले सबै हडपेर कु’टपिट गर्दै सडकमा पुर्‍याए पछि, आमाबुबा मिडियामा (भिडिओ)
जेठो छोरा डा. प्रेमराज श्रेष्ठले काठमाडौमा भएको घर ओगटेको भन्दै बाबु आमाले सम्पत्ति फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै पर्वत कुश्मा वडा नम्बर-५ का स्थायी बाबु हरिकुमार श्रेष्ठ र आमा कमलादेवी श्रेष्ठले छोराले घरसहित आधा सम्पत्ति रोक्का गरेर कुटपिट गर्दै आएको जानकारी दिएका हुन् । ***यो समचारको पुरा भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।***
सुस्मिताको ससुरा,सासू र नन्दहरुको बयानमा के लेखएको छ ?। कसरी भयो सुस्मिताको ह$ त्या (हेर्नुहोस पुरा भिडियो)
पुण्य गौतमको कमेडीले पत्रकारनै ढले, कपिल शर्मालाई ठाडै च्यालेन्ज गरेपछि सबै चकित(भिडियो)